PhotoFlare, iyo Paint-yakafanana kodhi yemufananidzo mupepeti | Linux Vakapindwa muropa
Kana isu tichitaura nezve mapurogiramu ekugadzirisa mifananidzo muLinux, ndinofunga ndiri pachokwadi pandinoti chinonyanya kufarirwa GIMP Kunyangwe ichivengwawo nevazhinji, icho chishandiso icho vazhinji vedu chatinoshandisa kuita kubva zvakapusa kubata-kumusoro kune vamwe vane hunyanzvi, asi kune vashandisi vanoda chimwe chinhu chakareruka. Pakati peaya mapurogiramu akareruka, pagara paine yakakosha kwazvo, iyo Microsoft Paint yayo photoflare, iye protagonist weichi positi, anoita kunge ari dhende.
Photoflare haisi imwe yerudzi. Muchokwadi, mu ichi chinyorwa Tiri kutaura nezve anosvika gumi mafomu anoita zvimwe kana zvishoma zvakafanana chinhu. Chii chinoitika ndechekuti ichi chishandiso chiri chazvino uno, ine mamwe mabasa akakosha uye dhizaini yacho inoonekwa zvakanyanya. Tevere isu tinotsanangura izvo simba rayo uye maitiro ekuisa software, chimwe chinhu chatichaita nekuwedzera iyo yekuvandudza dura.
Maitiro ekuisa uye izvo Photoflare inotipa
Sezvatatsanangura, PhotoFlare iri inowanikwa kubva kune yako yekuvandudza nzvimbo, saka kuiisa iri nyore sekuwedzera uye kuisa pasuru. Tichazviita nekuvhura terminal uye typing iyi mirairo (muUbuntu uye zvigadzirwa):
Iko kune zvakare vhezheni yeArch Linux pa Iyi link.
Pakati peizvo chikumbiro ichi chinotipa, isu tine:
Marongero emavara (kupenya, musiyano, nezvimwewo).
Zvirimwa, flip, tenderera shanduko.
Resize uye Scale Chinyorwa Turu.
Mashiripiti wand / sarudza.
Nezve kukura kwayo, iri yakavhurika sosi yemufananidzo mupepeti wakagadzirwa uchishandisa C ++ uye Qt. Zviri zvine simba kupfuura Microsoft Paint uye mazhinji emakonesheni akataurwa muiyi link yapfuura, asi iri kure nemamwe maturusi ehunyanzvi senge anozivikanwa GIMP. Photoflare uye zvakafanana zvinoshandiswa zvakagadzirirwa avo vasingade kuita kudzvanyirira kukuru.
Rumwe ruzivo pairi rwepamutemo webhusaiti iyo iwe yaunogona kuwana kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Photoflare, yakavhurika sosi yemufananidzo mupepeti mune yakachena Paint maitiro
Ndiri kuenda kuyedza iyi. Ndakagara ndichishandisa KolourPaint.